[gallery_bank type = "mifananidzo" fomati = "masonry" title = "yechokwadi" desc = "nhema" inopindura = "chokwadi" kuratidza = "yakasarudzwa" no_of_images = "13 ″ sort_by =" random "animation_effect =" bounce "album_title =" chokwadi "album_id =" 2 ″]
Kuchengetedza Mushandirapamwe mavhidhiyo uye maTV
Oliver ari NATED Talk low transhipment nzvimbo, zvirongwa umo iye basa: chiedza uri mutambo, kwekuratidzira, semuenzaniso chiedza caricatures pamusoro Saudi Arabia, ari NSA, nezvimwewo, uye vezvenhau kugura kuti maonero pamusoro pokugara uye nedzimwe hanya ne nhau achaunza.
Muchidimbu chinyorwa naZDF 37 °, PixelHELPER & Oliver vanoratidza marongero aiita mwenje pamuzinda weAmerica muBerlin. Kubva kuunganidzwa kubva purojekita yake mune imwe imba yemarara muDusseldorf, musangano nevezvenhau, kune chaiko kuratidzira kwe "NSA in da house" light art caricature, iyo inofanira kupera nekuuya kwemapurisa.
PixelHELPER paTTE tracks. Chiedza chinoratidzwa pa Federal Intelligence Service, Berlin.Vhidhiyo pfupi inoratidza kurwisa kwakasimba, iyo Oliver akaronga pakuvakwa kwe Federal Federal Intelligence Service muBerlin. Izvi zvinoratidza "BMW panzvimbo yeBND" kupikisa nzira dzekucherechedza dzinoshandiswa nehupfumi hwehutano hwevanhu.
Pixel Munyaradzi naKimDotCom kuUS Embassy. United Stasi yeAmerica. Yakabudiswa muSPIEGEL "DerPakt". Iyi vhidhiyo inogadzirwa inoratidza chimwe chiito kupokana nemumiriri weAmerica muBerlin. "United Stasi yeAmerica" ​​inovhenekera pamadziro, asi chete kusvikira mapurisa asvika.
WDR Current awa rinenge Pixel Mubatsiri, Change NOK uye NSA.In mushoma ichi kubva WDR Current awa kubva 15.07.2013 wenhau akashuma pamusoro chiedza fungidziro of "United neStasi of America" ​​Logo, uyo akaronga kusazivikanwa kurovedzera panguva American Consulate.
[Kaviri projekiti LIVE mu WDR studio naAnne Engelke. Iyi vhidhiyo yekumusha inoratidza kuti masiraidhi ane logo "NSA mune da imba" akaunganidzwa uye kuratidzwa pamberi pezvivakwa zveUN muBonn neVienna.
[Chiedza chinofungidzira US Embassy Hamburg, chikepe chepamberi chinosangana nechikepe chemapurisa. Vhidhiyo inoratidza Oliver na Sep mune imwe yakanaka yekuAustria purazi, vachidana maAustria kuratidzira vachipokana neNSA muVienna. Ipapo iwe uri muHamburg pamberi pemumiriri weUS, iwe waunogona kusvika nechikepe. Iwe urikugadzira mureza weAustria neNSA kutenderedza logo. Chiito chinopera senge chero chipi zvacho: nemapurisa.
Hongu tinopenya! Bhabha Raab, Prosieben TV Prank.Vhidhiyo inotsanangura kuti Oliver neboka rake vakaita sei muviri weJung kuti aite chimwe chinhu pa "Schlag den Raab" muCologne. Pamutumbi izwi rokuti "Hungu tinosora" uye chiso chaB Obama chakanga chakavezwa. Ichi chiitiko chakanga chisinganzwisisiki chakawanikwa nokukurumidza nekuchengeteka.
Ndapota shandisai mabasa edu
Kana iwe ukatsigira chikonzero chedu, tinogona kuonga chero chipo chipi zvacho kuitira kuti tikwanise kupfuurira mapurisa edu nekusingaperi.
Kunyangwe ma euro mashoma anoita mutsauko! Kugovera kune hanya. Ndokumbirawo mubatsire basa redu rekubatsira.
Tagged: NSA mumba, zvichiongororwa, United Stasi yekuAmerica, Hongu tinopenya!